1. Iipancakes zilula kakhulu ukuzenza. Kuphela izithako ezimbalwa Kwaye ayifuni izixhobo ezizodwa ezinje Umkhombe okanye i-oveni nayo Yonke into oyifunayo ipaneli enye yoqweqwe lwanele. Namhlanje sinendlela yokwenza i-pancake. Kulula ngokwakho ukushiya omnye nomnye. Ungazama oku ekhaya.
2. Izithako zokwenza ipancakes 1. Ingqolowa yomgubo 2. Iswekile (kucetyiswa njengeswekile emdaka) 3. Umgubo wokubhaka 6. Amaqanda 7. Ubisi olutsha 8. Izinto ezifunwayo ezifana netshokholethi, ijem yeziqhamo, ubusi, iicokies, iziqhamo ezintsha, njl.
3. Hlanganisa izinto eziphambili ngokudibeneyo, kubandakanya umgubo wengqolowa, i-2-3 ladle, iqanda eli-1, ii-2-3 scoops zobisi olutsha, iswekile, kuxhomekeke kubumnandi obufunwayo. Emva koko vumela abantu baxube kakuhle. Ukuba awunayo i-beater, kulungile. Ingasetyenziselwa njengeleli yokhuni endaweni yoko
4. Okulandelayo, yongeza ezinye zezi zithako, ukuba zikhona: i-sachet ye-vanilla powder yencasa encinci kunye nevumba, kunye nomgubo ongaphezulu wokubhaka, malunga nesiqingatha setispuni, ngokwaneleyo ukukhanyisa ipanekuku. Kodwa lumka kwaye ungongezi umgubo wokubhaka omninzi, kuba oku kuyakwenza ukuba ipancake igcwalise kakhulu.
5. Vula igesi, usete ipani kubushushu obuphantsi. Yongeza nge-1 ithisipuni yeoyile okanye ibhotolo kwaye usasaze ibhotolo nge-ladle de kube kugcwele ipani.
6. Xa ibhotolo inyibilikile, sebenzisa i-ladle okanye i-ladle ukukhupha i-pancake batter esiyilungisileyo kwaye siyithulule ngaphezulu kwepani ibe yimilo ejikelezayo xa izakufumana iziqwenga ezi-3-4 kumxube womgubo owawulungisiwe ngaphambili. -8 iziqwenga, zilungele ukukhonza malunga ne-2
7. Xa elinye icala liphekwe ngokuchanekileyo, ungajika elinye icala. Lumka ungasebenzisi umlilo onamandla kakhulu. Zama ukuseta ipani Umlilo uthumela ubushushu ngokulinganayo epanini. Iipancakes ziyakuphekwa ngaxeshanye.
8. Beka ipleyiti kwaye uhombise ngayo nayiphi na into oyifunayo, nokuba yitshokholethi, ijem yeziqhamo, ubusi, iicookies, iziqhamo ezintsha, njl. Inguqulelo eneebhedi ineencasa ngokulinganayo!
9. Unjani? Indlela yokwenza i-pancake ilula kakhulu kunokuba bekulindelwe, akunjalo? Ngoku, awunyanzelekanga ukuba uxolelanise ikhefi kuba Ndingayenza ngokwam. Unokongeza ii-toppings ezininzi njengoko ufuna. Zama, kwaye uya kubanjwa. Ukuqala kunokuba nokuhamba kancinci, kodwa ukuba uzama ukuziqhelanisa rhoqo Ngokuqinisekileyo uya kuba nokutyibilika ngakumbi Kude kube lusuku olunye uya kuyazi iresiphi oyithandayo oyifunayo Zeziphi izithako kunye nobungakanani bokubeka Nciphisa iswidi ngendlela othanda ngayo. Izibonelelo zepancake akukho lula ukwenza kuphela. Ndonwabela iincasa ezintsha Ngezinto zokuthambisa nazo Izintandokazi zethu yiBhanana kunye neNutella, ke uzama ntoni kwaye uthanda ukutya iipenikeyiki kunye neyona?